Child Health | MyanCare
သားသားမီးမီးလေးတွေမှာ တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်လာလျှင် ဘယ်လို ပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲ။
by myatlynn | Aug 10, 2020 | Child Health
မေမေတို့ရေ သားသားမီးမီးလေးတွေမှာ တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်လာလျှင် ဘယ်လို ပြုစုစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတော့….
ရေဓာတ်ကို လုံလောက်စွာတိုက်ပေးပါ။(အဖျားကြောင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက် ခြင်းကို ထိန်းပေးပါတယ်)။
အာဟာရ ပြည့်ဝစွာ ကျွေးမွေးရပါမယ်။
လုံလောက်စွာ အိပ်စက် အနားယူခိုင်းပါ။
ပုံမုန်ချည်ထည်လေးပဲ ဝတ်ဆင်ပေးပါ။(အဝတ်အစားကို အထူကြီးလည်း မဝတ်ပေးပါနဲ့၊ပါးပါးလေးလည်း မဝတ်ပေးပါနဲ့)။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အညီ ဆေးဝါးများကို တိုက်ကျွေးပေးပါ။
အရေးပေါ် ရောဂါလက္ခဏ(အစားလုံးဝမဝင်ခြင်း၊ အလွန်မှိန်းခြင်း ၊ဝမ်းပျတ်ဝမ်းလျောခြင်း၊ အလွန်အမင်းအန်ခြင်း ၊ဆီးနည်းခြင်း ၊ခြေလက်များ အေးဆက်ခြင်း ၊ အသက်ရှုမြန်ခြင်း)တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပါက နီးစပ်ရာ ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်း သို့သွားရောက်ကုသမှု ခံယူပါ။
ကလေးကျွမ်းကျင်ဆရာဝန် များနှင့် ၂၄နာရီ နေ့/ည မရွေး ကြိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းခေါ်ပြီးမေးမြန်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်မယ် ရင်သွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့ဝန်ဆောင်မှုမှာမန်ဘာဝင်ထားလိုက်ပါ ~
မန်ဘာဝင်စဉ်ကတည်းက ရင်သွေးလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း (Electronic Medical Record) EMR စနစ်နဲ့ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကွန်ပျူတာ မှာ သိမ်းဆည်းပေးထားတယ်
မှတ်တမ်းတင်တဲ့အတွက် ရင်သွေးတစ်ဦးချင်းအလိုက် အသေးစိတ်ကို ဆရာဝန်တွေက သိထားတဲ့အတွက် အပေါ်ယံမဟုတ်ပဲ တိတိကျကျပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်
ကလေးအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး များမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းပြောတာအပြင် viber ကနေလဲ ပုံတွေ video တွေသုံးပြီး ဆရာဝန်တွေက ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပေးတယ်။
ဖေဖေ မေမေတို့ဘက်က ဖုန်းမဆက်ဖြစ်ရင်တောင် ဆရာဝန်တွေက ပုံမှန် ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး အခြေအနေကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးပေးမှာဆိုတော့
သားသားမီးမီးရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျက်ခြေမပြတ်တော့ဘူးပေါ့။
” သွားတိုက်ပျင်းတဲ့ သားသားမီးမီးတွေကို သွားတိုက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ…?”
သွားတိုက်တံကို ကလေးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါစေ..။ သူကြိုက်တဲ့ တိရစ္စာန်ရုပ်လေးတွေ ၊ Spider Man တို့ ဘာဘီတို့ စသဖြင့်အရုပ်လေးတွေပါတဲ့ သွားတိုက်တံလေးတွေက ကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေမှာပါ။
ကလေးသွားတိုက်ဆေးမှာ စတော်ဘယ်ရီအရသာ ဖရဲသီးအရသာ လိမ္မော်အရသာ စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိလို့ ကလေးနှစ်သက်တဲ့ သွားတိုက်ဆေးကို ဝယ်ကြည့်ပါ…။
ကလေးနဲ့ အတူတူ သွားတိုက်ပါ…။ မိဘနဲ့ကလေးအတူသွားတိုက်ခြင်းက မိသားစုကိုပိုပြီးနွေးထွေးစေပါလိမ့်မယ်….။ ကလေးလည်းဖိအားမများတော့ဘူးပေါ့။
ဇွဲရှိဖို့တော့ လိုမယ်နော် ။
ခေတ်သစ် မေမေတို့ရေ မိုးဦးကာလ ရောက်လာပြီးဆိုတော့ သားသားမီးမီး တွေကို အရင်ကထပ် ပိုဂရုစိုက်ရပါတယ်နော်…
မိုးရာသီ မှာ ရောဂါ ဖြစ်စေသော မှိုများ ၊ဗိုင်းရက်စ် ပိုးမွှားများ ၊ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားများ ၊ ကပ်ပါးကောင်များနှင့် ရောဂါသယ်ဆောင်နိုင်သော အင်းဆက်ပိုးမွှားများ အလွယ်တကူ ပေါက်ဖွား လွယ်ပါတယ်။
ဒါအပြင် ရာသီအကူးအပြောင်း မှာ အအေးမိနှာစေးတာတွေလည်း အဖြစ်များပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့ နာမကျန်း လွယ်လွယ် ကူကူ မဖြစ်အောင် ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မိုးတွင်းမှာ ကိုယ်ခံအား အမြဲကောင်းနေစေဖို့ ….
ကလေးကို ဘယ်လိုတွေ ဝတ်ဆင်ပေးသင့်သလဲ?
ကလေးရဲ့ အသက်အလိုက် မျှတတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် နဲ့ အရပ် ရှိလား?
ကလေး ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံ တွေရော မှန်ကန် ရဲ့ လား?
မျှတတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ် ရှားမှုတွေရော ရှိရဲ့လား?
အာဟာရ တန်ဖိုး ပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ အစားအသောက် တွေကို ဘယ်လို့ရွေးချယ်သင့်လဲ?
ဒီလိုအချက်တွေ အားလုံးကို ရင်သွေး ကျန်းမာရေး Call Center ကဆရာဝန် တွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် ရှင်။ ကလေးတစ်ယောက် ချင်းဆီအလိုက် အသက်အရွယ် အလိုက် အကြံဉာဏ်တွေပေးဖို့ ရင်သွေးက ဆရာဝန် တွေက အသင့် ရှိနေမှာပါ။
by myatlynn | Aug 11, 2020 | Child Health
မိုဘိုင်းနည်းပညာတွေ ဖောဖောသီသီရှိနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာ ကလေးတွေကို Screen Time လုံးဝမရှိရဘူးလို့ ပိတ်ပင်ထားနိုင်ပါရဲ့လား။ ဒီတော့ Screen Time ကို စနစ်တကျလေး သတ်မှတ်ပေး ထားမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအတွက် ဘေးကင်းစွာနဲ့ ကစားသင်ယူမှုဖြစ်စေမှာပါ။
သင်နံနက်စာပြင်ဆင်နေချိန်မျိုး၊ နေ့လည်စာပြင်ဆင်ပေးနေချိန်မျိုးတွေမှာ Screen Time ထား ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့လေးတွေရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းကားလေးတွေပြပေးထားမယ်ဆိုရင် သင့် အတွက်လည်း အချိန်ရ၊ ကလေးတွေလည်း ပျော်ရဆိုတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိမှာပါ။
Screen Time ပြီးဆုံးပြီဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းပိတ်ပေးပါ။ ကလေးကိုတော့ မကြည့်နဲ့ပြောပြီး ဆက် ပြီးဖွင့်ထားတာမျိုး၊ အသံတွေဆက်ထွက်နေတာမျိုးကျ ကလေးကိုဘယ်လောက်ပဲတားနေနေ အ သုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်က အရမ်းတိတ်ဆိတ်လွန်းနေလို့ဆိုရင်တော့ သီချင်းသံလေးတွေပဲ ဖွင့်ထားပြီး ကလေးတွေ မြူးမြူးကြွကြွ ပျော်ပျော်ပါးပါး ကခုန်နေစေလိုက်ပါ။
အာရုံပြောင်းသွား ပြီး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျ ကလေးတွေကို စနစ်တကျဖြစ်စေဖို့ အချိန်ဇယားနဲ့နေခိုင်းတာက အဆင်ပြေတာလည်းရှိသလို တချို့သောမေမေတွေအတွက် အတော်လေးရုန်းကန်ရတဲ့အခက်အခဲမျိုး တွေနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာကမှပြီးပြည့်စုံလွန်းနေတာမျိုးမရှိဘူးလို့တွေးထားရသလို အလိုလိုက်လွန်းတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်မသွားစေဘဲ အလိုက်သင့်လေးနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင် မှုနဲ့ဆန္ဒကိုသာ ဦးစားပေးပါ။ အချိန်ဇယားအတိုင်း ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့် အဆင်မပြေဘူးဆိုလည်း စိတ် အေးအေးထားပြီး နောက်ရက်တွေကျ ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ။
နေ့ရက်တွေတိုင်းမှာ မိသားစုဝင်တွေ ဘေး ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စည်းစည်းလုံးလုံးရှိနေဖို့သာ အရေးကြီးတာပါ။ အလုပ်တွေနဲ့ ကလေးတွေ ကိုအချိန်မပေးနိုင်ခဲ့သမျှ ဒီအချိန်မှာ မိသားစုအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ အတိုးချပြီး ရရှိတာဆိုပြီး အကောင်းမြင်ကြည့်ပေးပါ။
တစ်နေကုန် တပျော်တပါးကစားသင်ကြားထားခဲ့ရသမျှ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျသွားလို့ နှစ်နှစ်ခြိုက် ခြိုက်အိပ်မောကျသွားတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ မေမေ၊ ဖေဖေတို့လည်း တစ်နေကုန်ပင်ပန်းထားခဲ့သ မျှ အမောပြေကြရမှာပါ။
မိသားစုအတူတကွအချိန်ကုန်ရင်း နောင်ရက်တွေမှာ အရင်လိုပျော်ရွှင်ဖွယ် အတိပြီးတဲ့ သာယာတဲ့နေ့တွေရောက်လာတော့မှာလို့ ဖြေသိမ့်အားပေးရင်း COVID-19 ကြောင့် အိမ်မှာနေရတဲ့ကာလမှာ မေမေဖေဖေတို့ရဲ့ ပူပန်ဖိစီးမှုတွေလည်း အတန်အသင့်ပြေလျော့သက်သာရာ ရသွားစေမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
သားသားမီးမီးလေးတို့အတွက် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
“သားသားမီးမီးလေးတို့အတွက် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ အကြောင်းသိကောင်းစရာ”
သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဟာ Flavi virus သယ်ဆောင်ထားတဲ့ Aedes ခြင် ကိုက်စက်ခြင်း ကနေတဆင့် ကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးရွာသီမှာ ခြင်ပေါက်ဖွားမှု များလာတာနှင့် အတူ သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုလည်း များလေ့ရှိပါတယ်။
ရောဂါပိုးရှိတဲ့ခြင် ကိုက်ခံရပြီး(၄)ရက်ကနေ (၆)ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏစတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး (၁၀)ရက်ခန့်အထိ ကြာရှည်တတ်ပါတယ်၊
ရောဂါပိုး ပထမဆုံး စတင် ဝင်ရောက်သည့် အခါ အချို့ကလေးတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏ ပြသလို တချို့လည်း ရောဂါ လက္ခဏမပြတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေး ရောဂါလက္ခဏ အဆင့် (၄) ဆင့် ရှိပါတယ်။
အဆင်(၁) မှာ သာမန် တုတ်ကွေးပုံစံ မျိုးပဲ တွေ့ရပြီး နေပြန်ကောင်းသွားတက်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိရိယာနှင့် လက်မောင်းမှာ ငါးမိနစ်ခန့် စည်းပြီး စမ်းသပ်တဲ့နည်းနှင့်လက်ဖျံမှာ အနီစက် ပေါ်တာကို ကြည့်ပြီး စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်။ ၎င်းကို Hess test လို့ခေါ်ပါတယ်။
အဆင့်(၂) မှာတော့ အဖျားပိုကြီးလာတဲ့အပြင် ကော်ဖီရောင်များအန်ခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်းနှင့် ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဆင့် (၃) မှာ အထက်က ပြောထားတဲ့ လက္ခဏတွေအပြင် ကလေးက အရမ်းမှိန်းလာခြင်း၊ သတိလစ်သွားခြင်း၊ ခြေဖျား လက်ဖျားများ အေးစက်လာခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုလက္ခဏများမှာ ကလေးမှာ shock (သွေးလန့်ခြင်းအဆင့်) ဖြစ်တော့မယ့် လက္ခဏများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်(၄) မှာ သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးခုန်နှုန်းတို့ တိုင်းမရတော့ဘဲ Dengue Shock (သွေးလန့်ခြင်း အဆင့်) ရောက်ပြီး အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါတယ်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေး မှာ အဆင့် လေးဆင့် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဆင့်ချင်းဆီ ကူးပြောင်း သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဆင့်တစ်မှ ရုတ်တရတ်ချက်ချင်း အဆင့် သုံး၊လေး ကူးပြောင်းသွားခြင်းများလည်း ရှိပါတယ်။
ကလေးတချို့ မှာ အပြင်းဖျားနေရာကနေ ရုတ်တရတ် အဖျားကျသွားတဲ့အခါ မိဘတွေအနေနှင့် ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေမိပါက အလွန် အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ကလေးမှာ တကယ်အဖျားပျောက်သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ Shock (သွေးလန့်ခြင်း အဆင့်) ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် မိဘများအနေနှင့် ကလေးငယ်တွေဖျားတဲ့အခါ မပေါ့ဆဘဲ ဂရုတစိုက် ပြုစု စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
သွေးလွန်တုတ်ကွေးလို့ သံသယဖြစ်တဲ့ လက္ခဏတွေ တွေ့ရှိတာနှင့် ကျွမ်းကျွင်တဲ့ ဆရာဝန်များနှင့် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး စတာတွေ အားလုံးအတွက်..
ကလေးကျန်းမာရေး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်။
နေ့/ည အချိန်မရွေး ၂၄နာရီ ဆက်သွယ်နိုင်ရမယ်။
ဆေးကုသတာအပြင် ကလေးအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး (ဥပမာ – ကလေးကို ဘာကျွေးရမလဲ၊ စကားမြန်မြန်ပြောတတ်အောင် ဘယ်လိုသင်ပေးရမလဲ) စတာတွေလို ကလေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှ တိုင်ပင်နိုင်ရမယ်
ကလေးရဲ့ အဒေါ်၊ ဦးလေး တစ်ယောက်လို ရင်းရင်းနှီးနှီး အားကိုးနိုင်ရမယ်။
အပေါ်ယံ ယေဘုယျမဟုတ်ပဲ ကလေးအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိထားပြီး တိုင်ပင်ပေးနိုင်ရမယ်။
ခေတ်သစ်မေမေတွေ သိထားသင့်တဲ့ မီးခိုးထဲက ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အကြောင်း
COVID-19 ကို ကာကွယ်နေတဲ့ ကာလပတ်လုံး ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကိုဘယ်လို ဂရုစိုက်ကြမလဲ?